အယ်လ် Diablo: သရုပ်ဆောင် Martin Acero ၏ပုံမှန် (ဓာတ်ပုံများ) - TELES RELAY
အယ်လ် Diablo: သရုပ်ဆောင် Martin Acero ၏မျက်နှာအစစ်အမှန် (ဓါတ်ပုံများ)
By နေပြည်တော် On ဇွန်လ 23, 2020
တစ် ဦး သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းကြီးလေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူများစွာကရုပ်ရှင်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်သရုပ်ဆောင်မင်းသားတွင်လည်းလက်ခံထားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည် အစစ်အမှန်ဘဝ။
တစ် ဦး သရုပ်ဆောင်သူ့ကိုမှတာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းမဆိုအခန်းကဏ္iesခံပြီးနေစဉ်။ မကောင်းဘူး၊ ကြင်နာတယ်၊ ရှက်တတ်တယ်၊ ဒါဟာရုပ်ရှင်ရုံရဲ့ဥပဒေပါ
ထို့ကြောင့် Miguel Varroni အမည်ရှိသည့်မာတင် Acero သည်စီးရီးတွင်မာနထောင်လွှားသော၊ "အယ်လ် Diablo"။ ဘယ်ကြည့်ရှုသူတို့တွင်မိမိပုံရိပ်ကိုမှေးမှိန်။ ဒါပေမယ့်မင်းသားကတကယ့်ဘ ၀ မှာဒီလိုမျိုးလား။
ကောင်းသောဆံပင် telenovelas ထုတ်ယူ! - ဗီဒီယို
Telenovelas delirium !! - ဗီဒီယို
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ Telenovelas မြေကွက် - ဗီဒီယို
ထို့ကြောင့် Miguel Varroni သည်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူသည်မဆိုးကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် "မင်းကမင်းထင်နေတာမကောင်းဘူး။ ငါ့အခန်းကဏ္playedကနေပဲငါကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ ငါကိုးကွယ်သောမိန်းမသည်ငါချစ်ရာသခင်ကိုငါဆိုင်၏။
မင်းသားမင်းသမီးသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အသွင်အပြင်ကိုအထင်မြင်မှားစေသော။ သူသည် Catalina ၏မိခင်နှင့်စီးရီးတွင်Albéro၏ဇနီးဖြစ်သော Catherine Siachoque နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည် "Catalina" ။ အင်း၊ ဒီလောက်ဆိုးတဲ့သူအတွက် ၂၃ နှစ်အတူတူအတူတူနေရမယ်!? wow ဤပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်ပါသည် ...
ဤဆောင်းပါးသည် https://afriqueshowbiz.com/telenovelas-de-la-serie-el-diablo-le-vrai-visage-de-lacteur-martin-acero-photos/ တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
COVID-19: ဆေးဝါးများ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုပါ
AU သည်တောင်ဆူဒန်တွင်ဒေါ်လာ ၉ သန်းဖြင့်ကြွေးကျန်များကိုလှုပ်ရှားမှုများရပ်ဆိုင်းထားသည်
မာလီ - အာဖရိကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများမှီခိုနေရသည်။ + Burkina- Telenovelas ...